08.27.2011 | Favourite Memories
← Zipper’s diary
Prepare for Hurricane Irene – 08.27.2011
ချက်ပီး ဒီလို ပလတ်စတစ်ဗူးလေး နဲ့ ထည့်ပီး။ ရေခဲသေတာ အအေးခန်းထဲ အစားအသောက်များကို ခဲထားလိုက်ပါတယ်။
၀က်သား၊ မှို အချိုချက်
” save food “
” save medicine “
အစွမ်းထက် မြန်မာဆေးတွေ။ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ၀ယ်လာတာ။
ရေခဲသေတာကို အမြင့်ဆုံး နံပါတ် ပေးထားပီး အစားအသောက်များ ကြာရှည်ခံအောင် သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် မီး ပျက်သွားလည်း စတိတ်မှာ မြန်ရင် နာရီပိုင်းနဲ့ မီးပြန်လာပီး ကြာရင် စတိတ်က Mayor က ပြောတာတော့ အလွန်ဆုံး ၃ ရက်လောက်ပဲ မီး နဲ့ ရေ ပျက်မှာပါတဲ့။
(ပျက်ချင်မှလည်း ပျက်မှာပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ ….)
ရေချိုးခန်းမှာ ပစည်းသိမ်းတဲ့ စတိုပုံးကို ရေလှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးတဲ့ bath tub လည်း လှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။
Food, water, medicine, camera, hand phone, card, hygiene, full petrol, candle, batteries, flashlights, plastic bags, clothes and cash.
သောက်ရေသန့် (မုန်တိုင်း နောက်ဆက်တွဲ ၀မ်းပျက်၊ ၀မ်းလျှော ရောဂါ ကျရောက်နိုင်လို့ ဆေးဝါးနှင့် သောက်ရေသန့် ရေကို ကျိုချက်သောက်ကြတာပါ။) မုန့်၊ ဆေးဝါး၊ အဝတ်၊ ကင်မရာ၊ ဖုန်း၊ အာမခံကတ်၊ ငွေ၊ ပတ်စပို့၊ နေထိုင်ခွင့်ကတ်၊ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး နေ့စဉ်သုံးပစည်း၊ ကားထဲ ဆီအပြည့်။ (ဖယောင်းတိုင်၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး) လည်း ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲမှာ ပါ ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်မှန်ကို ပါကင်တိတ် နဲ့ x ပုံစံ ကတ်ထားပီးပီ။
Angel သူ့ဘာသာ သူထည့်ထားသော သူ့ အရုပ်များနှင့် သူ့ပစည်းများ၊ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ILBC မှာ Fire alarm မြည်ရင် rehersal လုပ်နေကျ။ ဒီဘက်က ကျောင်းမှာလည်း လုပ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့က အဲဒီ အိတ်တွေ သယ်ပီး Rehersal လုပ်ကြည့်ပီးပီ။
ဒါပေမယ့် လို ရ မယ်ရ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာပါ။
ဒယ်ဒီကတော့ စိတ်မပူဘူး။ မာမီကတော့ ရန်ကုန်မှာ နာဂစ်လည်း ကြုံဖူးတော့ စိတ်ပူတယ်။
သတင်းတွေမှာတော့ ကိုယ့်တို့ အခုနေတဲ့ နေရာ မ ပါ ပါဘူး။ မြောက်ဘက်ကနေ လာတဲ့ အိုင်းရင်းက တောင်ဘက်ကို သွားချင်နေတာမို့ ကြားက လမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်တို့ စတိတ်ကိုလည်း ဖြတ်အုံးမှာပါ။ သူမ မြို့ထဲ လာချင်ရင်လည်း လာနိုင်မှာပေမယ့် သူ့ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့ က ပြောတာတော့ သူမက coast တွေကနေ တက်သွားတယ်ဆိုပဲ။
ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာ ဘာမှ မရှိဘူး အိုင်းရင်းရေ ….
Goodbye Irene !
CT readies for Hurricane Irene
Hurricane may force shutdown of Conn. nuke plants
Aug 27, 07:56 PM – Aug 28, 05:00 AMIn effect for Fairfield
Aug 27, 08:23 PM – Aug 28, 08:30 PMIn effect for Fairfield, Middlesex, New Haven, New London
By Thet Nandar • Posted in 2011 - Summer Season, Climate, Home, Hurricane Irene, USA, USA - Connecticut	• Tagged 2011, climate prepare